September 15, 2021 - Celegroup
ငွေပိုပြီး စုမိနိုင်စေဖို့ ထိရောက်တဲ့အချက်တွေ
September 15, 2021 Celegroup1975 0
အကြွေးနဲ့ဝေးအောင်နေသူဌေးကြီးတွေကသူတို့ဘဝမှာကြွေးမြီဆိုတာမျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးအကြွေးကိုအတင်မခံတာဟာပိုက်ဆံစုနည်းတစ်မျိုးပါပဲအကြွေးနဲ့ဝေးအောင်နေတာ စိတ်အချရဆုံး နံပါတ်တစ်နည်းလမ်းပါပဲတိကျသေချာတဲ့ အသုံးအစွဲအစီအစဉ်ကိုယ့်ဝင်ငွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့ ပိုင်းခြားကန့်သတ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်၅၀ ၃၀၂၀နည်းလမ်းနဲ့ မဖြစ်မနေ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝင်ငွေရဲ့၅၀ရာခိုင်နှုန်းတစ်ကိုယ်ရည်လိုအပ်ချက်အတွက်၃၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပို တဲ့၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို စုဆောင်းမယ်ဆိုလည်း ဒါကိုတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါရွှေငန်းလေးလိုတစ်နေ့ဥတစ်လုံးဆိုလိုတာကတော့အသုံးအစွဲလက်မဖွာဖို့အသုံးအဖြုန်း မများဖို့လိုပေမယ့်ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဝင်ငွေပိုတိုးတက်လာစေမယ့်အရာတွေ ကိုတော့ ဝယ်ယူသင့်ပြီးရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ဥပမာ လက်ပ်တော့ပ်တွေ၊ နေရာစုံသွားနေရသူအဖို့ သွားလာရေးအဆင်ပြေဖို့ရာကားဝယ်ထားမျိုးတွေကရွှေငန်းလေးလိုတစ်နေ့ဥတစ်လုံးဥပေးမှာအသေအချာပါပဲပေးစရာရှိတာအရင်ပေး ကိုယ့်ပိုက်ဆံတွေရလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက မဖြစ်မနေ မသုံးမဖြစ်၊ မရှိမဖြစ်တဲ့ ခေါင်းပူခေါင်းခဲစရာ စရိတ်စကတွေကို အရင်ပြီးပြတ်အောင်ပေးချေထားလိုက်ဖို့ပါပဲ။ဒါမှပိုတဲ့ပိုက်ဆံကိုမှ ဘယ်လိုဆက်သုံးစွဲသွားမလဲအရှင်းလင်းဆုံး စဉ်းစားသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကပိုက်ဆံကို မလိုတဲ့အပိုမှာမသုံးမိစေဖို့ချွေတာပြီးသားဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပိုက်ဆံရလာတိုင်းအပျော်လွန်သုံးဖြုန်းဖို့ပါ နောက်ကိုပို့ထားပြီးသားဖြစ်လာစေမှာပါလုံးဝပိုက်ဆံမသုံးဘူးဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေဒီလိုလုံးဝ ပိုက်ဆံမသုံးမယ့်ရက်တွေကိုတစ်ပတ်သို့တစ်လမှာ ဘယ်နှရက်အထိထားရှိသွားမလဲ […]
လောကကြီးဆိုတာ မိခင်တစ်ယောက်လိုမဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းတွေချည်းပဲ မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့။ အရှုံးကို မလိုချင်ရင် မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားပါ။ ကိုယ့်ကို အလဲထိုးတဲ့လူတွေသာ ကိုယ့်ကို ပိုတော်ဖို့အတွက် လှုံဆော်မူ့ အကောင်းအဆုံးပေးနိုင်တာပါ သင် နာကျင်ရတဲ့အခါ လက်ခံလိုက်ပါ။ ဘဝက သင့်ကို တစ်ခုခု သင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ ဆုံးရှုံးမူ့တိုင်းမှာ ရလဒ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သင်ခန်းစာပေါ့။ ရည်မှန်းချက် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်နေရုံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်နဲ့ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်။ စာအုပ်စာပေတွေ […]
ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ဆိုးနေပါစေ မိဘတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကား (၇) ခွန်း…….. မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ စိတ်အခန့်မသင့်လို့ မိဘကိုပြန်ပြီးတော့ အော်မိပြောမိတာတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို ပြန်ပြောတတ်တာတွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် မသိသာကြပေမယ့် မိဘတွေကို လုံးဝ မပြောသင့်တဲ့စကားဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်တွေက မသိလိုမသိဘာသာ ဒီအတိုင်း အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေ ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွေကို တကယ်ချစ်ပြီး တကယ်ဂရုစိုက်ပေးကြတဲ့ မိဘတွေကိုတော့ မပြောသင့်တဲ့စကား […]
မြင်းမိုက် တစ်ခါတုန်းက မြင်းတစ်ကောင်နဲ့ ခရု ပက်ကျိ တစ်ကောင် လမ်းမှာ တွေ့ကြတယ် ။ မြင်းက ခရုကို.. ” မင်းတော်တော် နှေးတဲ့ အကောင်ပဲ.. နောက်ကျတဲ့ ကောင်က လမ်းဖယ်ပေးရတယ်ကွ ” လို့ ကဲ့ရဲ့တော့.. ” အိုအဆွေမြင်း.. ကျွန်ုပ်တို့က တစ်ကယ့် ပြိုင်ပွဲတွေမှာသာ မြန်အောင် သွားတာပါ.. မယုံရင် သင်နှင့် ကျွနုပ် အပြေးပြိုင်မလား ” လို့ စိန်ခေါ် […]
ဂျက်မားက ပြောဖူးတယ်။ မိတ်ဆွေရင်းချာတွေ ဆွေမျိုးတွေကို ဈေးရောင်းတဲ့အခါ ဘယ် လောက်ပဲ လျှော့ရောင်းရောင်း တန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘဲ ခင်ဗျား သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံကိုလိုချင်တယ်လို့ ပဲမြင်မှာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့ ရင်းနှီးထားတဲ့ ငွေ အချိန် အင်အား တွေကို သူတို့ အလေးထားမှာမဟုတ်ဘဲ ခင်ဗျားထက်စာရင် အခြားသူစိမ်းတစ်ယောက်က သူတို့အပေါ် အမြတ်ထုတ်သွားတာကို ပိုလို့လိုလားတယ်။သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးသူရဲ့ စီးပွားရေးကို အားပေးမယ်ဆိုတာထက် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ခင်ဗျားသူတို့ဆီက အမြတ်ဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲပဲ တွေးနေမှာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ လူမွဲတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလို့ […]
ဝါယာရှော့မှဖြစ်တဲ့ မီးဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ရလေအောင်(ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိထားသင့်တယ်)
မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် မီးလောင်းခြင်းများ လေ့လာကြည့်ရာ ဝါယာရှောစ်ကြောင့် အများဆုံးဖြစ်နေပါသည်။ ဘာကြောင့် ဝါယာရှောစ် ဖြစ်ရပါသလဲ။ ကျွန်တော့်အတွေ့ကြုံနှင့် သိသလောက်ရှင်းပြပါမည်။ တိုးတက်လာသော လူနေမှုအဆင့်တန်းများ၏ အဓိက သော့ချက် တစ်ခု ဖြစ်သော အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ များပြားစွာ ယခုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာပါသည်။ ယခင်က မိမိအိမ်တွင် သွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးများ၏ခံနိုင်ရည်ထက် ယခုအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းသုံးစွဲနေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ Loadက ပိုများနေသည်ကိုသတိမထားမိကြပါ ။ မျိုးစုံသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုသာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဝယ်ယူကြပြီး […]
ဖုန်းသုံးသူတိုင်း….သိထားသင့်တဲ့ ….ဖုန်းလေးလံခြင်းကို… ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်… အချက်များ ၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache တွေကလည်း နေရာအများကြီးယူပါတယ်။ ဒီတော့ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။ Junk File တွေ Cache file တွေကို နေ့စဉ် ဖုန်းမှာ နဂိုပာဝင်တဲ့ Cleaner နဲ့ရှင်းလင်းပေးပါ။ […]
ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက် (၅)ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် သင့်တို့ရဲ့မိသားစုက သီရိဂေဟာလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီ လူတိုင်းက ပျော်ရွှင်နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုဘဝကို လိုချင်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီးအတွက် စိတ်လုံခြုံမှုကို ပေးချင်ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မိသားစုဘဝကို သက်ရောက်မှုတွေက အကောင်းဘက်ကထက် အဆိုးဘက်ကနေသာ ပိုများလာပါတယ်။ ဒါဆို အိမ်ထောင်ကို ဦးစီးနေကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) အိမ်ပြန်လာသူကို ကြိုဆိုရာဝယ် ခင်ပွန်းပြန်လာတာကို ဇနီးက ဆီးကြိုတာဖြစ်စေ၊ ဇနီးပြန်လာတာကို ခင်ပွန်းက […]
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း (၇)မျိုး မျက်မှန်ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျက်မှန်တပ်နေရသူတွေသာသိမယ်။ ကိုယ်နှင့်မခွာအမြဲဆောင်ယူသွားနေရတဲ့ပစ္စည်းထဲမျက်မှန်ကထိပ်ဆုံးပါတယ်။ မျက်မှန်ကိုင်းလေးကျိုးသွားလို့ ဆိုင်သွားပေးထားရင်တောင် တစ်ရက်လောက်မျက်ကန်းဘဝထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတာမျိုးက စာရေးသူကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါကြောင့်မျက်မှန်တပ်သူတွေအတွက် မျက်မှန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတလည်းရပြီး အကျိုးလည်းရှိစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။အမှောင်ထဲမှာမျက်မှန်ရှာတဲ့အခါ ကိုယ်အပြင်ထွက်ခါနီးမှ မီးကပျက်၊ မျက်မှန်ဘူးကိုလည်းဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်။ အနုမြူသော့ချိတ်ကို ကိုယ့်မျက်မှန်အိတ်ထဲချိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတ်တွဲချည်ထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲမှောင်နေတဲ့အခန်းဖြစ်ပါစေ လွယ်လွယ်နဲ့ရှာတွေ့သွားမှာပါ။ ၂။မျက်မှန်ကိုင်းချောင်ကျတဲ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းချောင်ကျတာကတော့ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်က ခပ်ပြေပြေဖြစ်ပြီး နားပေါ်ကချော်ကျလို့ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်ကို ရေနွေးပူပူထဲစိမ်ပြီး […]
မချစ်မိခင်မှာ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဆိုတာ သိစေနိုင်တဲ့ အချက်(၁၀)ချက် ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့်သူ သို့မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို ပျိုမေ တို့ စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ် ရည်းစားများတဲ့ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်မိရင် ပထမဆုံးထိခိုက်နစ်နာရမှာကပျိုမေတို့ဖြစ်ပြီးတော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် နောင်တရစရာ စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယခုလို လူရှုပ်တစ်ယောက်ကို မရွေးချယ်မိဖို့အတွက် သူဟာလူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိထားမိစေနိုင်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကို မျှဝေပေးပါရစေ။ မချစ်မိခင်မှာ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဆိုတာ သိစေနိုင်တဲ့ အချက်(၁၀)ချက် ၁။ […]
ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းဖို့ ပိုက်ဆံအိတ် ဖွင့်လိုက်သောအခါ….
ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းဖို့ ပိုက်ဆံအိတ် ဖွင့်လိုက်သောအခါ…. ကောင်တာမှာငွေရှင်းဖို့ ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လိုက်တော့ အိတ်ထဲက တီဗီရီမုဒ်ကို ငွေကိုင်စာရေးကလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် သိချင်စိတ်ကိုမအောင့်နိုင်တာနဲ့မေးလိုက်တယ် သူမေးလိုက်တာက…. ဈေးဝယ်လာသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကောင်တာမှာငွေရှင်းဖို့ ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လိုက်တော့ အိတ်ထဲကတီဗီရီမုဒ်ကို ငွေကိုင်စာရေးကလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်သိချင်စိတ်ကိုမအောင့်နိုင်တာနဲ့ မေးလိုက်တယ်။ “ခင်ဗျားတီဗီရီမုဒ်ကိုအမြဲဒီလို ယူလာတတ်သလား” “အမြဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ကျမယောင်္ကျားက ဘောလုံးပွဲကြည့်မှာမို့ ဈေးဝယ်လိုက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ငြင်းတယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိတ်တိုပြီးယူလာတာ” သင်ခန်းစာတစ် မိန်းမရဲ့ဝါသနာကိုလိုက်လျောပြီး အဖေါ်လိုက်ပေးပါ။ ငွေကိုင်ကရယ်လိုက်ပြီး အမျိုးသမီးဝယ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကို နောက်ပြန်တွန်းဖယ်လိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးက […]
ဒီအချက် (၁၈)ချက်က တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်
ဒီအခ်က္ (၁၈)ခ်က္က တစ္ဘဝလုံးစာအတြက္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္ပါတယ္ (၁) လူေတြကို သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုေပးပါ။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ ရက္ရက္ေရာေရာေပးပါ..။ (၂) သင္နဲ႔စကားေျပာရတာ အဆင္ေျပတဲ့သူမ်ိဳးကို လက္ထပ္ယူပါ။ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် စကားေျပာဆိုဖို႔ အဆင္ေျပျခင္းဟာ တျခားအရာေတြထက္ ပိုအေရးပါလာပါလိမ့္မယ္ ။ (၃) ၾကားသမွ်ကို အကုန္မယုံပါနဲ႔။ ရွိသမွ်အကုန္ မသုံးပါနဲ႔။ အိပ္ခ်င္သေလာက္ အကုန္မအိပ္လိုက္ပါနဲ႔ ။ (၄) ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့စကားကို နားလည္ခံစားၿပီးမွသာ ေျပာပါ ။ […]